ကမ္ဘာပေါ်ကအာဏာရှင်ကြီးတယောက်ကျဆုံးသွားခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကမ္ဘာပေါ်ကအာဏာရှင်ကြီးတယောက်ကျဆုံးသွားခြင်း…
Posted by koyinmaung on Oct 21, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
.လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ယာယီအစိုးရတပ်တွေက ခေါင်းဆောင်ဟောင်း မိုမာ ကဒါဖီကို သုတ်သင်ခဲ့တယ်လို့ ယာယီအစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ကဒါဖီအပေါ်သစ္စာခံတဲ့တပ်တွေ ခုခံနေရာ Sirte မြို့ကို ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ဝင်သိမ်းချိန်မှာ ယာယီအစိုးရ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကောင်စီ NTC တပ်တွေက ကဒါဖီကို ပစ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့အလောင်းကို ယူခဲ့တာလို့ NTC တာဝန်ရှိသူ တော်တော်များများက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကဒါဖီကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
ကဒါဖီနဲ့ တော်တော်တူတဲ့လူတယောက်ရဲ့ သွေးတွေ ပေကျံနေတဲ့ ပုံတွေကို နိုင်ငံတကာ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေက ပြသနေပါတယ်။ NTC ဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Abdel Jalil ဟာ မကြာခင်မှာ နိုင်ငံကို မိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Sirte မြို့ကို လုံးဝ အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် လစ်ဗျားနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ပြီလို့ ကြေညာမှာဖြစ်တယ်လို့ NTC တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
Tripoli မြို့တော်ရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင်ပေါင်း ၂၂၃ မိုင်လောက်မှာရှိတဲ့ Sirte မြို့ဟာ ကဒါဖီရဲ့ မွေးရပ်မြို့ဖြစ်သလို ကဒါဖီကို ထောက်ခံသူတွေ အဓိကနဲ့ နောက်ဆုံး ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ NTC ဘက်က တိုက်ခိုက်သူတွေက မြို့ထဲမှာ အလံသစ်ကို လွှင့်ထူပြီး အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ သေနတ်တွေကို လေပေါ်ကို ပစ်ဖေါက်နေကြတာကို ရုပ်မြင်သံကြားတွေပေါ်မှာ ပြသနေကြပါတယ်။
www.voanews.com/burmese voa သတင်းမှာဖတ်လိုက်ရပါသည်
အာဏာမလုကြ ဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးမြေ ထပ်မကျဘဲ လစ်ဗျားနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
ကဒါဖီ ပြီး၇င် .. နောက်တစ်ယောက် က ဘယ်သူ့ အလှည်လဲ…. ?????
အော် ကဒါဖီ ကဒါဖီ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါ စေ ဟေဟေဟေ
အရင် ရှေးရှေးက အာဏာရှင်တွေလိုပဲ ၊
အာဏာရှင် တွေဟာ သတ္တိ မရှိကြတာကိုတွေ့ရတယ် ။
ကဒါဖီဟာ ပထမ Sirte မြို့ကနေ convoy နှင့် ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတယ် ။
ပြင်သစ် လေယာဉ် ကတွေ့လို့ Rocket နှင့် ပစ်တော့ ပြန်ပြေးတယ် ။
ကွန်ကရစ်ပိုက် မြောင်းထဲ ဝင်ပုန်းတယ် ။
NTC Fighter ကောင်လေးနှင့် တွေ့တော့ ၊
“Don’t Shoot, Don’t Shoot” ဆိုပြီး ၊
ရဲရင့်စွာ မတိုက်ပဲ အဖမ်းခံတယ် ။
ဟိုကောင်တွေက သူ့ကို ကားဘောနက်ပေါ်တင် ၊
ကြိုးတုတ်ပြီး မြို့ထဲလှည့် ဖို့လုပ်တယ် ။
ပေါင်ကြားကို ခြေထောက်နှင့်နင်းတယ် ။
သေသွားတော့ သူ့အလောင်းကို ၊
အင်္ကျီချွတ်နှင့် ခြေထောက်ကဆွဲပြီး ၊
တွေ့ရသလောက်ကတော့စံနစ်တခုကနေတခုပြောင်းတာ တော်တော်ကြောက်စ၇ာကောင်းတယ်။ အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကဒုတိယ ပထမကတော့ လူကောင်းဖြစ်စေ၊လူဆိုးဖြစ်စေ ကံမကောင်းတဲ့သူကတော့ ရက်ရက်စက်စက်ခံစားခဲ့ရတာဘဲ။
ကောင်းတာလုပ်၊ ကောင်းတာဖြစ်၊ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့၊ မကောင်းတာဖြစ်ပေ့ါဗျာ။
ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာပါ တွေ့နေရပါတယ်။
အချိန်တန်ရင် ဖြစ်လာရမှာ၊ ဖြစ်လာရတာပါပဲ။
အခုထိ အကောင်းဖက် မရောက်သေးသူတွေ အတွက် သတိမှတ်စရာတွေ ပေါ့ဗျာ။
အာဏာရှင်တွေကျသွားတာကောင်းပါတယ်.. တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ အလားအလာရှိသွားတာပေါ့
သာမန်သူတောင်းစားတယောက်တောင် သူ့ထက် သက်သက်သာသာ သေရလိမ့်မယ်။
တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သေခြင်းမျိုးနဲ့ သေရတယ်။
အမြဲအနားမှာရှိသူတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘဲ လုပ်သမျှခံ၊ အသေဆိုးဘဲ။
စိတ်ထားမတတ်သူတို့ ရဲ့ သွားရာလမ်းပါဘဲ
ခွေးသေဝက်သေ အသေဆိုးနဲ့ သေရတာပဲ
ပထမ VDO မှာတော့ ဒါဏ်ရာတော့ရထားတယ်
သိပ်မဆိုးသေးဘူး ရုန်းနိုင် အော်နိုင်သေးတယ် ။
ဒုတိယ VDO မှာတော့ ဖိနပ်နှင့် ရိုက်နေတာတွေ့တယ်
သွေးတွေ ရွှဲနေပြီ ။
တတိယ VDO မှာတော့ အလောင်းကို Half Naked နှင့်
လမ်းပေါ်မှာ ခြေကကိုင်ပြီး ဆွဲနေတာ တွေ့တယ် ။
Sirte မှာမိတယ် ။
ဒါပေမယ့် Sirte က ကဒါဖီဇာတိမြို့ ဆိုတော့
NTC က စိတ်မချတော့
NTC က သူပိုင်နိုင်တဲ့ Mistara မြို့ ကို ခေါ်လာခိုင်းတယ် ။
ပြဿနာက Sirte နှင့် Mistara ကြားမှာ
NTC သူပုန်ဂိတ်တွေ အများကြီးကိုဖြတ်ရတယ် ။
လူချစ်လူခင် အရမ်းများတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆိုတော့
တဂိတ်ဖြတ် တခါအားပေး နှင့် ဝိုင်းအားပေးလိုက်တာ
Mistara ကို အလောင်းပဲ ပြန်ရောက်တော့တယ် ။
သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေနှင့် စာရင်
သူခံသွားရတာ သိပ်မများလှပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
မနက်က CNN ကတော့ ဂဒါဖီ ဖမ်းမိတဲ့ vdo က version ၅ ခုလောက်ရှိနေတယ်။ ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း ကြေညာသွားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီးဘာ သံဝေဂ ရလည်းဆိုတော့ သူဝဋ်ပြန်လည်ပြီး တိရစ္ဆာန် လို သေသွားရပါတယ်။
ဒီလိုဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ အားကြီးတဲ့ သူက အားနည်းတဲ့သူကို အနိုင်ယူတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေလိုဘဲ ၀ိုင်းဝန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်လိုက်လို့ပါ။
ကိုယ်ခံရတုန်းက ဘာလို့ဒီလို လုပ်ရလည်း မေးခွန်းထုတ်သူများဟာ ကိုယ်နိုင်တဲ့ အလှည့်လည်းရောက်ရော မေ့သွားပြီး အဲ့ ဒီ စက်ဆုပ်စရာကောင်းပါတယ်ဆို တဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင်ပြန်လုပ်ကြပြန်ရော။